Kumanaan ka mid ah shaqaalaha Amason ee Qaarada Yurub oo shaqa... | Universal Somali TV
Kumanaan ka mid ah shaqaalaha Amazon ee qaarada yurub ayaa bilaabay dibad bax shaqa joojin ah oo ay kaga cabanayaan mushaarka ay qaataan iyo daqliga kale faa,idada soo gasha marka loo fiiriyo howlaha ay qabtaan.
Maanta oo talaado ah ayaa xarumaha ay shirkadan Ganacsi ku leedahay wadanka Garmalka waxaa ay bilaabeen dibad bax shaqa joojin ah waxaana ku soo biiray shaqaalaha kale ee shirkada ee ku sugan wadamada Poland iyo Spain.
Shaqaalaha Amason ee Garmalka ayaa ku dhawaaqay hal maalin oo shaqo joojin ah,iyaga oo dalbanaya heshiis wanaagsan iyo damaanad qaadka caafimaadka iyo xaaladaha Kale.
Xarunta shirkadan ee wadanka Germalka ayaa waxaa ka shaqeeya 16,000 oo ruux.
Waxaa ay tilmaameen in shirkadan ay dhaqaalo fiican ka sameysay ganacsiga Online-ka ah loona baahan yahay in mushaar wanaagsan ay siiso shaqaalaha sida ay sheegtay afhayeenka shirkada Verdi haweeneyda lagu magacaabo Stefanie Nutzenberger.
dhanka kale wararka aynu ka heleyno wadanka Spain ayaa waxaa ay sheegayaan in 2,000 oo ka mid ah shaqaalaha shirkadan ay maanta shaqada joojiyeen taasi oo macnaheedu yahay in 80 boqolkiiba ay shaqada ka tageen maanta.
Balse war ka soo baxay maamulka shirkada Amason xarunteeda Spain ayaa lagu beeniyay warkaasi.
Kan-xigaWasaarada Arimaha Gudaha Kenya oo baa...
Kan-horeMaxkamada Danbiyada Caalamiga ah oo k...
40,457,231 unique visits